Samachar Batika || News from Nepal » तपाईंहरु राति का’मुक स’पना देख्नुहुन्छ? यस्ताे हुनसक्छ कारण
तपाईंहरु राति का’मुक स’पना देख्नुहुन्छ? यस्ताे हुनसक्छ कारण
पोखरा माघ , २०७६
किन आउँछ का’मुक सपना ?
केही मान्छे से’क्सका बारेमा हरदम सोचिरहेका हुन्छन्। से’क्स गर्ने हिम्मत नभएका यस्ता मान्छेले मनमा कुरा दबाएर बसिरहेका हुन्छन् ।
युवाहरूलाई से’क्सको सपना आउनु आश्चर्यको कुरा हैन तर बुढाबुढीलाई समेत यस्तो सपना आउन सक्छ । से’क्सको सपना उमेर बढ्दै जाँदा झन् झन् आउँछ । अत्यधिक रचनतात्मक मान्छेलाई पनि से’क्सको सपना आउँछ ।
१.पूर्वप्रेमीसँग सेक्स गरेको सपना
तपाईंले नचाहे पनि पूर्वप्रेमी वा प्रेमिकासँग से’क्स गरेको सपना तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार प्रेमीहरू भूपू भएपनि सपनामा त उनीहरू आफ्नै हुन् नि भन्ने सोच व्यक्तिमा निहित हुन्छ । उनीहरूसँगको पुरानो याद अचेतनमा रहिरहेको हुन्छ ।
हरेक व्यक्तिलाई कोही न कोही प्रसिद्ध कलाकार मन पर्छ नै । अनि उनीहरूसँग से’क्स गरेको सपना पनि आउन सक्छ । यस्ता सपना देख्ने मान्छेका बारेमा मनोवैज्ञानिकहरूको के मत छ भने तिनीहरू जिन्दगीमा केही गर्न चाहँदैनन्, खालि स्वैरकल्पनामा बस्न चाहन्छन् ।
से’क्स जो वा जेसँग पनि गर्न मन लाग्छ मान्छेलाई । बिजुलीको पोलदेखि सडकको खाल्डोसम्मलाई नछोड्ने मान्छे पनि भेटिन्छन् । कसैकसैलाई जनावरसँग से’क्स गरेको सपना आउन सक्छ । यस्तो सपना आउने मान्छे आफूमा मान’सिक समस्या छ कि क्या हो भनेर आत्तिन सक्छ । तर मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार दामी से’क्स गर्न मन भएका मान्छेले जनावरसँग से’क्स गरेको सपना देख्छन् ।
कहिलेकाहीँ हाम्रो सपनामा एलियन आउँछन् र हामी उनीहरूसँग क्री’डा गर्छौं । हैन हामीले के गरेको यो जस्तो पनि लाग्छ । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार से’क्समा रोमाञ्चको चाहना गर्नेहरू यस्तो सपना देख्छन् । सपना जस्तो भएपनि सपना नै हो । तपाईं आफ्नो से’क्स लाइफको आनन्द उठाउनुहुन्छ भने वास्तविक संसारमा आउनुस् । सपनामा मात्र रमाएर के गर्नु ? एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित मिति १७ माघ २०७६, शुक्रबार ०९:५०